जसले राष्ट्रिय झण्डाका डिजाइन गरे, भन्छन् - झण्डा वैदिक, वैज्ञानिक र व्यावहारिक | Suvadin !
Sep 19, 2019 09:29
काठमाडौंको टङ्गालमा जन्मिएका रिमाल कोलकाता विश्वविद्यालय अन्तरगत बङ्गाल इञ्जिनीयरिङ कलेजबाट सन् १९५७ मा इञ्जिनियरिङ पास गरेका हुन् । त्यसपछि उनी सदर पब्लिक निक्सारी अड्डामा जागिरे भए ।
राष्ट्रकै गौरव गर्नलायक हालको अवस्थाको राष्ट्रिय झण्डाको डिजाइनर रिमाल अहिले झण्डाको महत्व बढ्दै गएकामा हर्षित छन् । उनले आफ्नो शशी शङ्कर कलालयमा राष्ट्रिय झण्डाको डिजाइन अध्येताहलाई अध्ययन गर्न मिल्ने गरी बनाएरै राखेका छन् । झण्डाको महत्वलाई सर्वसाधारण नागरिकले बुझून् र उनीहरुमा पनि अपनत्व महसुस होस् भन्ने हेतुले सरकारले हरेक नागरिकको घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउन सक्ने गरी कार्यविधि संशोधनसमेत गरिसकेको छ ।
यस पटकको संविधान दिवस नै झण्डामय बनाउन सरकारले आह्वान गरेपछि झण्डाको महत्व र चर्चा चुलिँदो छ । दयाराम श्रेष्ठद्वारा लिखित ‘नेपालको राष्ट्रिय झण्डा’ इतिहासमूलक कृतिले विसं २०५३ मा मदन पुरस्कार पाएको कुरा पनि यहाँनिर स्मरणीय छ ।
विसं २०१९ अघि नेपालमा निश्चित मापदण्डको झण्डा थिएन । परम्परादेखि नै दुई त्रिभुज र चन्द्रसूर्य राख्ने चलन थियो । कसैले सूर्य माथि त कसैले तल राखेर झण्डा बनाउँथे । त्यसमा मान्छेको अनुहार पनि राखिएको हुन्थ्यो । “चन्द्रसूर्य भनेको छ, आफुखुशी जे कल्पना गरेर राखे पनि भो, तर त्रिकोण, चन्द्रसूर्य, रातो र नीलो रङचाहिँ जसले पनि राख्थे”, रिमालले विगतको अनुभव सुनाए ।
राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि २०१८ सालमा नयाँ संविधान लेख्ने बेला थियो । त्यस समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद पन्त थिए । उनका भिनाजु डा बलराम जोशीको घर पनि रिमालले नै डिजाइन गरेकाले नियमित अन्तरक्रिया पनि भइरहन्थ्यो । त्यही सम्पर्कका कारण उनलाई राष्ट्रिय झण्डा बनाउने महत्वपूर्ण अवसर मिलेको हो । रिमालले सम्झे, “गर्न सक्छौ भन्दा, मैले सक्छु भनेँ ।”
त्यसै बनाएर त भएन । ठूलै चुनौतीको भारी बोकेर उहाँले अनुसन्धान सुरू गरे । त्यस बेलाका बूढापाका जानकारहरुसँग भेट्न थाले । संयोग आफ्ना हजुरबा शिवनाथ कविराज र संस्कृतका धुरन्धर विद्वान् थिए । जिजुबाजे पण्डित विश्वनाथ शास्त्री पाणिनिको अवतार नै भनिन्थे । उनीहरुबाट प्राप्त सूचना झण्डा बनाउनका लागि अमूल्य स्रोत बन्यो ।
उनले वास्तुशास्त्र पनि अध्ययन गरे । “शास्त्रमा तीन बाई चारको रेक्टेङगल बनायो भने अनन्त हुन्छ, यो भन्दा राम्रो नाउँ केही पनि छैन भन्ने पत्ता लाग्यो । हाम्रो झण्डाको नीलो रङ अनन्तको रङ हो, पानी र आकाशको रङ पनि नीलो, आकाश भनेको अनन्त हो, अनन्त कालदेखि आइराखेको मुलुक फेरि अनन्तसम्म जानुपर्‍यो भनेर डिजाइन गरेँ”, झण्डाको डिजाइनबारे रिमालले भने । तीन हप्ताको प्रयासमा तयार भयो । “बनाएर बुझाउनेबित्तिकै सबैले हेरे, मन पराए, चित्त बुझाए, ओके गरे, कसैको प्रतिक्रिया नै आएन, एकै पटक संविधानमा आयो सकियो”, रिमालले भने ।
तीन बाई चारको रेक्टेङगललाई हेरेर चन्द्रसूर्यलाई डायग्राममा तयार पारिएको उनी बताउँछन् । रङ फेर्नुपर्छ कि भन्ने उहाँलाई लागेको थियो तर गोपालप्रसाद रिमालले ‘रातो र चन्द्रसूर्य जङ्गी निशान हाम्रो’ भनेर लेखेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्दा परम्परा बिग्रन्छ भन्ने उनलाई लाग्यो ।
कलाकार रिमाल महाभारतकालदेखि नै यही किसिमको झण्डा प्रयोग भएकाले यो नेपालको परम्परा भएको बताउछन् । महाभारतमा कौरवलाई मद्दत गर्न नेपाल(त्यतिबेला नेपाल नै नाम भन्ने थिएन) बाट पनि सेना गएको थियो । “त्यो बेलामा पनि नेपाल भन्ने शब्द रहेछ, हाम्रो हिसाबले त सात हजार वर्ष पहिलेको कुरा हो । त्यसैले त्यो महत्व हराउनु पनि भएन,” रिमालले थपे ।
सूर्यलाई धेरै पराक्रमी मानिन्छ । सूर्य प्रज्ञा र चन्द्रमा करुणाका प्रतीक हुन् । “प्रज्ञाभन्दा त करुणा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ नि होइन र, जतिसुकै प्राज्ञ भए पनि करुणा भएन भने रावण जस्तो हुन्छ, करुणा हुनेबित्तिकै बुद्ध हुन्छ, धार्मिक हिसाबले पनि झण्डामा प्रयोग भएको चन्द्रसूर्यको त्यति ठूलो महत्व छ”, उनले प्रष्ट पारे ।
विसं २०६६-०६७ मा झण्डा फेर्ने कुरा आउँदा उनी दुखित भए । धार्मिक मान्यता, झण्डाको इतिहास र महत्व बुझेपछि भने झण्डा फेर्ने कुरा हराएको उनले बताए ।
उनले भने, “हाम्रो पहाडहरु सबै त्रिकोण नै त्रिकोण छ, हामीलाई त्रिकोण फेर्नुपर्ने के दरकार, हेर्नेबित्तिकै यो नेपालको झण्डा हो भन्ने सीधै पत्ता लाग्छ, अरुको झण्डा एउटै रङको छ, कसैको माथि फर्केको छ, कसैको तल फर्केको छ, कसैको अगाडि त कसैको पछाडि छ, सबै झण्डामा पाँच छ वटा रङमा त छ नि, अलिकति फरक भनेको अफ्रिकनको हो ।”
अरु देशको झण्डा चिन्न त सोध्न जानुपर्छ या इन्साइक्लोपिडिया पल्टाउनुपर्छ तर नेपालको झण्डा खोजिरहनु पर्दैन । यसले परम्परादेखि नै हाम्रो पहिचान राखेर छाडेको उनी बताउछन् । “यस्तो यूनिक देश छ नि हाम्रो, त्यसैले झण्डा पनि यूनिक छ, सानो देश जहिले पनि संसारमा हेर्नेपर्ने मुलक भनेर किन हाम्रो मुलुक माथि आउँछ त ? फरक छ नि त हाम्रो मुलुक, भलै आर्थिकमा पछि परेको होला”, उनले भने ।
घरघरमा झण्डा ?
अमेरिकामा हरेक व्यक्तिले घरमा र मोटरमा समेत झण्डा राख्न पाउँछन् । अहिले सरकारले नागरिकले समेत झण्डा राख्न पाउने व्यवस्था गरेकामा रिमाल खुशी छन् । “ढिलै भए पनि सरकारले बुद्धिमतापूर्वक काम गरेको छ, आफ्नो गौरव हो, हरेकको घरमा राख्न किन नदिने ?” उनले खुशी हुँदै भने।
सरकारले यही असोज ३ गते संविधान दिवस नै झण्डामय बनाएर मनाउन लागेको सुन्दा रिमाल औधि खुशी छन् । “पहिले नै गर्नुपर्ने काम ढिलै भए पनि गरेकामा सरकारलाई धेरैधेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु,” खुशी हुँदै रिमालले भने ।
यसवर्षको संविधान दिवसको नारा नै ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाऔँ, घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराऔँ’ भन्ने छ ।